Cuqaasha Mardoodi-Jeex Oo Taageeray Musharaxnimadda Madaweynaha Ee Xisbiga KULMIYE - Wargane News
Home Somali News Cuqaasha Mardoodi-Jeex Oo Taageeray Musharaxnimadda Madaweynaha Ee Xisbiga KULMIYE
Hargeysa (Wargane News) -Madaxdhaqameedka Gobolka Maroodi-jeex ayaa si buuxda u taageeray musharax-nimadda madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed (Siilaanyo), oo dhawaan la shaaciyay in uu u tartamayo musharax nimada madaxweynenimada xisbiga KULMIYE dhexdiisa.
Qaar ka mid ah cuqaasha iyo salaadiinta, gobolka Marood-jeex oo isugu jiray boqorro, salaadiin iyo waxagaradka kale oo shalay warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa ayaa waxay sheegeen in ay si weyn u bogaadinayaan musharaxnimada madaxweynaha tallada haya iyo waxqabadka xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo oo mudadii ay jirtay ku tallaabsatay waxqabad baaxad leh oo la taaban karo.
Caaqil Khadar Maxamed Axmed oo ka mid ah cuqaasha gobolka Maroodi-jeex ee shirka jaraa’id qabtay ayaa ka hadlay sida ay cuqaal ahaan u arkaan musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga KULMIYE, isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaanu soo dhawaynaynaa oo aanu taageer san nahay madaxweynaha Somliland musharaxnimadiisa, isagoo ah madaxweynihii horumarka, dawladiisnuna ay tahay tii horumarka. Haddii aanu nahay madax dhaqameedka iyo cuqaasha gobolka maroodi-jeex aad iyo aad ayaanu u soo dhawaynaynaa arrintaasi.waxaanay leenahay mar kale ayaanu diyaar u nahay in shacabku ku doorto.”
Caaqil Xuseen Colaad Jaamac oo ah gudoomiyaha gudidda cuqaasha gobolka Marood-jeex oo ku hadlayay af-ka madax-dhaqameedka gobolka ayaa ugu baaqay bulshadda reer Somaliland in ay si weyn ugu dabaal degaan xuska 18-ka May, isaga oo tilmaamay in maalintaasi ay tahay maalinta qaranka. waxaanu yidhi “Xuska 18-ka May waa bishii aynu guulaysanay ee aynu la soo noqonay xornimadeennii lixdankii fool halawday. Maalintani ma aha wax ciyaar inagu soo galay ee waa wax suntan, waana maalinta qaranka Somaliland. Waxaanu leenahay bulshada guud ahaan waa in xuska maalintan loo soo baxaa oo si weyn loo xusaa, dhamaan gobolada Somliland oo dhan.”
Guddoomiyaha guddida cuqaasha gobolka Marood-jeex Caaqil Xuseen Colaad, waxa kale oo uu ka hadlay adkaynta nabad galyada, isaga oo arrintaa ka hadlayayna waxa uu yidhi “Guud ahaan shacabka Somaliland waxaanu ugu baaqaynaa in nabada la ilaaliyo, maadaama oo Somaliland ay cadow badan leedahay. Markaa waxaanu leenahay waa in dadku wada boolis ahaadaan, oo ay ilaashadaan amaanka iyo xasiloonida dalka.” Sidoo kale cuqaashani ayaa Wasiirka wasaaradda Arrimaha gudaha mudane Cali Maxamed Warancade, ku bogaadiyeen dedaalka uu ugu jiro ka shaqaynta ammaanka guud ee dalka iyo daminta shaqaaqooyinka dalka ka dhaca.
Waxaanay cuqaashani shacabka ugu baaqeen in ay xil weyn iska saaraan adkaynta iyo ilaalinta ammaanka iyo xasiloonida dalka. Waxa kale oo ay cuqaashani wasiirka Arrimaha gudaha ugu mahad celiyeen guri uu u kireeyay cuqaasha gobolka Maroodi-jeex, kaasi oo ay uga faa’iidaystaan hawlaha ay u hayaan bulshadooda.Cuqaashani waxa ay tilmaameen waxqabadka madax-weynaha Siilaanyo dalka ka fuliyey mudadii ay jirtay xukuumadiisu iyaga oo sheegay in haddii markale la doorto inuu dalku ka sii horumari karo halka maanta la gaadhsiiyey.